२ लाख दाइजो नदिएको का’रण २२ वर्षीय रन्जनाको बिहे भएको ८ महिनामै ह’त्या ! – Life Nepali
२ लाख दाइजो नदिएको का’रण २२ वर्षीय रन्जनाको बिहे भएको ८ महिनामै ह’त्या !
विराटनगर। तिलक स्वरूप २ लाख रुपैयाँ नदिएको विषयलाई लिएर विराटनगर महानगरपालिका – ११ पिचरास्थित माइती घर भएकी २२ वर्षीय रन्जना सहनी (बहरदार) को ह*त्या भएको छ । शुक्रबार राती भारत अररीया जिल्लाको जोगवनीस्थित भेडयारीमा उनको ह*त्या भएको हो । ह*त्या भएको दुई दिनपछि आइतबार विहान सिमावर्ती बजार जोगवनीदेखि करिब ३ किलोमिटर दक्षिण भवानीपुरस्थित ‘परमान’ खो*लामा रन्जनाको श*व फे*ला परेको जोगवनी प्रहरी चौकीका इन्र्चाज अफताब अहमदले जानकारी दिए ।
मृतकको अनुहार र शरिरको विभिन्न भा*गमा चो*टप’टक लागेको छ । प्रहरीले ह*त्या आ*रोपमा रन्जनाका श्रीमान भारतीय नागरिक जोगवनी भेडयारीका २५ वर्षीय भीम बहरदार सहनीसहित चार जनालाई शुक्रबार प*क्राउ गरेको छ । प*क्राउ पर्नेमा सैनी बहरदार, अर्जुन बहरदार र छिमिकी शिवानन्द मुखिया रहेका छन् । कु*टपिट पछि ह*त्या भएको प्राराम्भिक च*रणको अ*नुसन्धानबाट देखिएकोले विस्तृत रूपमा अनुसन्धान भइरहेको जोवनी प्रहरीले जनाएको छ ।
रन्जनाको ह*त्या उनकै श्रीमान्सहितको परिवारका सदस्यहरूले तिलक स्वरुप पसल गर्ने बहनामा २ लाख रुपैयाँ नदिदा ह*त्या गरेको माइती पक्षको भनाई छ । रन्जनलाई बारम्बार दाईजोको निउमा श्रीमान भीमको परिवारले य*ताना दिने गरेको हजुरबुवा उमालाल सहनीले बताए । रन्जनाको ८ महिना अगाडी गत फागुन २३ गते जोगवनी भेडयारीका भीम बहरदार सहनीसँग मागि विवाह भएको थियो । रन्जनालाई कु*टपि’ट गरि ह*त्या गरेपछि घरदेखि करिब १ किलोमिटर नजिक रहेको परमान खो*लामा लगेर फा*लिदिएका बताइएको छ ।
शनिबार छोरी हराएको खबर पाए पछि माइती पक्ष जोगवनीको भेडयारी पुगेका थिए । माइती पक्ष छोरीको घर पुग्दा कोही भेटिएन । दिनभरी खोजविन गर्दा पनि छोरी नभेटिएपछि आइतबार विहान स्थानिय बालवालिकाले खोलामा श*व देखेका थिए । परमान खोलाबाट रन्जनाको श*व झिकेपछि जोगवनी प्रहरीले श*वको पो*ष्माटम गर्न आइतबार दिउँसो फारबिजगन्ज लगेको छ ।
Previous हराएकी मेरी छोरी फेला पार्न आफ्नै छोरी सम्झिएर सेयर गरिदिनुहोला : श्रेयाकी आमा
Next घरमै पर-पु’रुषसंग भे’टेपछि कैलालीमा श्री’मानद्वारा श्री’मतीको ह’त्या !